Liiverpuul 4-0 Baarseloona (4-3): Gareen Jurgen Kilop dirree isaa irratti Baarseloonaa injifate - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Divock Origi galchiin jalqaba lakkoofsise injifannoo Liiverpuuliif murteessituu turte.
Liiverpuul Baarseloonaa dirree isaa irratti haala ajaa'ibsiisaan injifachuun walitti aansee waggoota lamaaf waancaaf dhaqqabe.
Liiverpuul iyya deeggartoota dirree Anfiildiin deeggaramuun galchii Nu Kaampi irratti irratti galmaa'e sadii deebisuun 4 fi 0'n mo'atee waancaaf dhaqqabe.
Erga bara 1986 Baarseloonaan Waancaa liigii Awurooppaa duriin [European Cup] kilabii Gootenbargi jedhamu waliin jalqaba 3 fi 0'n mo'amee booda injifachuun wancaaf dhaqqabee kun isa jalqabaati.
Divok Origiin daqiiqaa 7ffaa irratti galchii jalqabaa lakkoofsisus hanga Jorjiinoyoo Waayinaldam jijjiramee galutti 1 fi 0'n turan.
Waayinaaldam sekondii 122 keessatti galchiiwwan lama lakkoofsisuun abdii Liiverpuul haaromse.
Goodayyaa suuraa Waancaan bara kanaa erga 2013 as yeroo jalqabaaf Liyonel Mesiin ykn Kiritanoo Roonaaldoon kan keessaa dhabaman tahuu isaati.
Taphataan sarara ittisaa Tireenti Aleeksaander Arnooldi haala dhaabbii taphattoota ittisaa ilaaluun kubbaan Origiif dabarsuun, Origiin galchii lammaffaa isaa fi kilebii isaaf 4ffaa lakkoofsiise.
Baarseloonaan hanga daqiiqaa xumuraatti homaa gochuu hin dandeenye. Taphattotni akka Liyonel Mesii, Suwaarez, Kootinihoo fi kaan maqaa gurguddaa qaban qabxicha jijjiiruu hin dandeenye.
Goodayyaa suuraa Sekondiiwwan 122 booda Waayinaaldam galchii lakkoofsisuun 3-3 wal qixa taaise.
Liiverpuul taphattoota ciccimoo akka Mo Saalaa fi Roobertoo Firminihoo malee taphachuun isaa jalqaba akka tilmaamni gadi aanaa tahe kennamuuf taasiseera.
Liiverpuul bara 2005 Istaanbulitti duubaa ka'uun AC Miilaan irratti galchii lakkoofsiisuun waancaa injifachuun isaa ni yaadatama. Haa tahu malee kan Baarseloonaa irratti amma galmeessan seenaa kilebichaa keessatti isa jalqabaa fi ol aanaadha.
Waxabajji 1 Maadiriditti, har'a galgala kan taphatan Tootenam ykn Ayaaksi [Ajax] waliin waancaaf kan taphatan taha.
Poolisiin yakka ajjeechaa kaariyuus irratti xiyyeeffate qorachaa jira.
Waraanni Sudaan bulchiinsa seera Shari'aa itti fufsiisuu fedha
Liyonel Mesiin kubbawaan hedduu yaalus karra eegaan Liiverpul Alison fashaleessuu danda'eera. Sadiyoo Maaneen taphataa cimaa taphichaa taheera.
Liverpuul sadarkaa kileboota gurguddoo bira gahe
Liverpuul waancaa Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa yeroo 9ffaaf kan dhaqaabe yoo tahu, Riyaal Maadirid yeroo(16), Miilan (11) and Bayern Munik(10) waancaaf dhaqqabaniiru.
Erga bara 2008 fi 2009 Maanchister Yuunaayitid xumuraaf walitti aansuun dhaqabee as Liiverpuul kilabii Ingiliz yeroo jalqabaaf walitti aansuun xumuraaf gahedha. Bara darbe Riyaal Maadiridiin injifatamee waancaa dhabunsaa ni yaadatama.
Galchiin sadii fi isaa ol jalqaba irratti lakkaa'amee deebisanii qabxicha galagalchuun seenaa Shaamipyoonsi Liigii Awurooppaa keessatti kun isa 4ffaadha.
Baarseloonaan kileboota Ingiliziin yeroo jalqabaaf galchii baay'eedhaan mo'amuu isaati.
Joorjinoyoo Waayinaaldam erga bara 2007 Riyaan Baabel Beeshiktash irratti taa'umsa jijjirraa irraa ka'uun galchii lama lakkoofsiseen as taphataa Liiverpuul jijjiirramee galuun galchii lama lakkoofsisedha.
Viidiyoo Taphataa cimaa Afriikaa kan BBC'tiif shan kaadhimaman keessaa tokko Mohaammed Saalahadha